साहित्य/रचना « Pana Khabar
-मणि भट्टराई खहरे रहेछु त्यसैले त बगाएर लगेछु गरीबको एक चोक्टो खेत पनि पाखो बारी र झुपडी पनि गोठमा बाँधिएका केही थान गाईभैसीहरू र आँगनमा खेलिरहेका स-साना नानीहरू पनि ।
काठमाडौं । गोधुली साहित्यीक प्रतिष्ठानले संस्कार समाज नेपालकी अध्यक्ष पशुपती गुरुङ सहित विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने ९ जनालाई अभिनन्दन तथा सम्मान गरेको छ । वरिष्ठ साहित्यकार भद्रकुमारी घलेको ८७ औं
-मणी भट्टराई एउटा गरीब तर सुन्दर र शान्त परिवार थियो । धेरै लामो समयदेखि त्यो परिवारमा एउटा बहुमूल्य रत्न थियो । यति धेरै बहुमूल्य कि त्यो ऊनिहरूले आफै बेच्न सक्नु
नेपाली साहित्यमा बिगत चार दशकदेखि सक्रिय बरिष्ठ साहित्यकार इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरितको नवौं कृतिको रुपमा २५ वटा कथाहरुको संकलन ऋतु फेरिंदै जान्छ प्रकाशित भएको छ। रत्न पुस्तक भण्डारबाट प्रकाशित यस कथा
-सरगम भट्टराई म त भोक मेट्न असिना टिप्छु सरकार मसिनो मिठो कहाँ पाउनु र ? भए खान्छु नभए सन्तोष मान्छु मलाई पसिना बिनाको मिठो मसिनो चाहिन्न म स्वाभिमानी छु त्यसैले
-बिन्दु परियार कथा कसको हुँदैन ? जसले जिन्दगी पाएको छ वा जसले जिन्दगी पाएको छैन–– सबैको । सबैलाई आफ्नो कथा ठूलोे लाग्छ । एउटा अरबपति होस् या बगरमा गिट्टी कुट्ने
राम्रो नजरको अगाढि हेर सधै फुल बनी फुले नराम्रो नजरको अगाढि लौं काँढा बनी बिझे जस्तो भाडो उस्तै आकृति बनी बस्छ रे पानी एस्तै छ संसार अब के गरु मनमा
शिष्टाचारयुक्त समाज निर्माणको अभियानमा रहेको ‘शिष्टाचार अभियान नेपाल’का अध्यक्ष सुमन दाहालले आम मानिसको जीवनसंग सम्बन्धित एक मार्मिक कविता वाचन गरेका छन् ”अन्तिम हुनसक्छ” जिवनको शाश्वत सत्यको नजिक मार्मिक कविता ।
– निराजन आचार्य नैरास्यतामा निरास खोज्दै छु, घृणामा प्रेम खोज्दै छु।फुटेको ऐनामा अनुहार खोज्दै छु र आफुलाइ खोज्दै टुटेका फुटेका जुटेका सबन्धहरुमा।प्रेम मान्छेले बनाउँछ,प्रेमले मान्छे बनाँउछ तर जिन्दगीले तोडेको कसममा
पछिल्लो समय मदन पुरस्कार प्राप्त चर्चित नेपाली उपन्यास ‘ राधा’ अंग्रेजीमा अनुवाद भएर अमेरिकी पब्लिकेसन मार्फत प्रकाशित भइ अन्तराष्ट्रिय बजारमा सफल रूपमा विक्रि वितरण भएसँगै बरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण धराबासी फेरि
-मणि भट्टराई चारूमती थियो उसको नाम सबैले ‘फूलमाया’ ‘फूलमाया’ भन्न थालेपछि के लाग्थ्यो र ऊ एक्लैको ! एकाएक चारूमती हराई -गाऊँबाट र फूलमाया देखापरी । फूलमाया साँच्चिकै फूल जस्तै थिई
–लीलाराज दाहाल गाई मारी गधा पोस्ने हामीसँगै छन् नि ! खान लाग्या गाँस खोस्ने हामीसँगै छन् नि ! बाचुन्जेल पराई ठानी तिरष्कार गरे पनि मर्दा रुँदै आगो झोस्ने हामीसँगै